«Tena hanody!» -
09/02/2018 admintriatra Tresaka 0
Marina fa ho sarotra ary mety tsy hisy mihitsy izany hoe fanadihadiana vaovao atao mikasika ny raharaha 7 Febroary 2009 izany kanefa tsy misakana ny adihevitra ary indrindra koa ho fampahafantarana amin’ny vahoaka fa tena natao sorona izy ireo tamin’io daty io.
Samy manana ny fahitany azy, samy manana ny fomba filazany, samy manana ny feo reny sy ny heveriny ho marina manodidina iny raharaha 7 Febroary iny. Fa misy tranga tsy mampandry ny eritreritra noho ny fanomezana lanja sy hasina izany hoe “Fahamarinana” izany ka tsy maintsy ambara. Tsy sanatria mamoha fota-mandry raha milaza izany satria aim-bahoaka am-polony maro no nafoy, natao sorona noho ny fitiavam-pahefana ary mbola tadiavin’ny sasany haverina indray ankehitriny.
Iza no nanomana ny 7 Febroary ary iza avy ireo nitifitra vahoaka? “Tsy ireo mpiambina ny lapan’Ambohitsorohitra irery no nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana…”. Maro tokoa ny sary sy ny horonam-peo ary horonantsary manodidina iny raharaha 7 Febroary 2009 iny no toa mitady hamarina io filazana iray io. Nisy mihitsy aza moa fijoroana vavolombelona nataona manamboninahitra nandray anjara mivantana tamin’ireny fandrodanana ny fitondrana Ravalomanana ireny, toraka izany koa ny horonantsary azon’ny France24 izay toa midika fanomanana ny zavatra hitranga mandritra io datin’ny 7 Febroary io.
Izay no nilazana teny ambony hoe mety ho sarotra ary tsy hisy mihitsy izany fanadihadiana vaovao mikasika ny raharaha 7 Febroary izany saingy izao kosa no mba tiana ambara: “Aoka ireo izay nandray anjara tamin’ny fanomanana io fanaovana sorona ny aim-bahoaka io mba hanaja ny rà latsaka ka tsy izy ireo indray ankehitriny no miseho ho mpanome lesona. Raha ny famerenana ny 7 Febroary bis no heverin’izy ireo fa lalana handrombahana fahefana dia aoka mba tena hanody azy ireo sy ny taranany mihitsy izany”.